Jesosy no nitondra ny fangirifirinao
Tianao, tiantsika Jesosy
Nefa Jesosy dia nitondra ny fahotantsika, nitondra ny fangirifirina farany izay mafy indrindra noho ny fitiavany antsika; fa raha ny tokony ho izy dia isika tsirairay avy no nilanja ny fahotantsika, sy ny heloka vitantsika. Nefa Izy dia nanolotra ny ainy sy nandà ny tenany mba hamonjena antsika, araka ny voalaza ao amin’ny Isaia 53:4 “Nitondra ny aretintsika Izy sady nivesatra ny fahoriantsika; kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian’Andriamanitra ary nampahiriana.”
Hitantsika araka ny voalaza eto amin’ny Isaia fa nanolotena Jesosy noho ny fitiavany antsika, mba hahatonga antsika tsy hanana elanelana eo amin’Andriamaitra; ka naleony nanao sorona ny ainy mba hamonjena antsika zanak’olombelona, ka handovana ilay fiainana mandrakizay. Jeosy no ilay mpanavotra izao tontolo izao, izay nantenain’ny Jiosy hamonjy sy ny zanak’Isiraely hamonjy azy. Araka izay hita ao amin’ny Lioka 24:21 “ Nefa nantenainay fa Izy no ilay efa hanavotra ny Isiraely; ary tsy izany ihany, fa androany no andro fahatelo hatr’izany nahatongavan’izany.” Somary diso fanantenana ny olona satria natolotra ny Mpanapaka Izy. Nefa ny zavatra tsy tsapan’ny olona fa efa voalahatr’Andriamanitra, ka izany no tokony hitadiavantsika mandrakariva ny tavan’Andriamanitra; ka mila ny fanekentsika ny fandraisana an’i Jesosy Kristy. Araka ny voalaza ao amin’ny Tantara faharoa 7:14 “Raha ny oloko izay nantsoina tamin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hanasitrana ny tany.”. Ka izany no nahatonga an’Andriamanitra naniraka ny anjeliny tamin’i Josefa, ny nanomezana ny anaran’i Jesosy Kristy; Izy ilay hamonjy izao tontolo izao, mba hamonjy ny very. Matio 1:21 “Ka hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe JESOSY; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany.”
Andriamanitra dia namela ny helontsika izay efa nolovaina tamin’i Adama sy Eva, ka nanolorany an’i Jesosy Kristy mba hamonjena antsika sy ireo mpino Azy, dia ny zanak’Isiraely izay navotana avy tany amin’ny tany Egipta. Nefa ny zanak’Isiraely dia sy ny olombelona ary ireo mpanoradalana sasany dia milaza fa tsy Izy no tonga hamonjy ny zanak’olombelona sy hanala amin’ny fahotana. Nefa misy amin’ireo mbola miandry ilay mpamonjy hafa; satria Jesosy dia olona tsotra, malemy fanahy, mora fo. Ka tsy iznay anefa no heritretin’ireto sasany fa olona matanjaka, mahery toa ireo olo-malaza, toa an’i Gideona, Débora, Samsona, Davida. Fa ny neritreretiny dia tsy ny hanafaka azy amin’ny fahotana fa ny hanafaka azy amin’ireo fahavalo ara-nofo. Nefa ny zavatra tsy fantany, ny famonoana olona, ny ady izany no mampisaraka antasika amin’Andriamanitra; satria Andriamanitra dia tompon’ny filaminana fa tsy tompon’ny fikorontanana. Ary izany anefa dia miteraka fahotana hoan’ny olona araka ny voalaza ao amin’ny Isaia 59:2 “Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin’Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino Izy.”
Fa mbola tiana’Andriamanitra isika olombelona ka naniraka ny zanany lahitokana Izy hamonjy antsika, ka hivoaka avy any ziona ny voaavotra dia ny zanak’Isiraely izany; araka any voalaza ao amin’ny Romana 11:26 “...ary amin’izany dia hovonjena avokoa ny Isiraely rehetra, araka ny voasoratra hoe: “Hivoaka avy any Ziona ny Mpanafaka, ary hampiala ny haratsiam-panahy amin’i Jakoba Izy;” sy ao amin’ny Jaona 1:29 “Nony ampitso dia nahita an’i Jesosy avy manatona azy Jaona, ka dia hoy izy: Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanira, Izay manaisotra ny fahoran’izao tontolo izao!” Koa izay mandray an’i Jeosy Kristy na ireo izay amin’ny Kristy Tompo, dia manantena fa vovela heloka satria Jesosy Kristy no efa nitondra ny helontsika sy nisolo voina antsika teo ambony Hazo Fijaliana. nanolotra ny ainy; manamarina izany ny ao amin’ny Romana 8:1 “Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy.”. Manaraka izany ny nandatsahany ny ràny no nanadio antsika, ka nanavaozana antsika indray teo anatrehan’Andriamanitra, Io no marika nomen’i Jesosy Kristy Tompo hoantsika araka ny voalaza ao amin’ny Hebreo 12:24 “...sy amin’i Jesosy, Mpanalalana amin’ny fanekena vaovao; ary amin’ny rà famafazana, izay miteny tsara lavitra noho ny an’i Abela.”
Ankehitriny mananjara tokoa ianao, eny isika rehetra izao raha amanana finoana an’i Jesosy Kristy Tompo. Ny teny hoe Kristianina mantsy dia mpanara-dia an’i Kristy, koa raha tiantsika ny ho voavonjy dia mila mandray an’i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika, satria Izy no mpanalalana eo amin’ny Ray; Izy no ahafahantsika mahita ny Ray satria tamin’ny Ràny no nanavotana antsika; ka naha afa-keloka antsika. Avy aminy ihany koa no hanakaikezantsika ny Tompo, ka mampifandray antsika amin’ilay Ray tsitoha. Koa hoantsika olombelona rehetra eto an-tany ny Tompo dia mampanantena antsika ny fiainana araka ny voasoratry ny Apostoly Paoly, ao amin’ny Filipiana 4:19 “Mahalala hietry aho, ary mahalala hotombo; na iza na iza, ary na amin’inona na amin’inona, dia efa nampianarina ny ho voky sy ho noana aho ary hanam-be sy halahelo.” Koa aoka hitombo mandrakariva ao amin’ny Tompo sy ny fanarahana azy; mila manetritena mandrakariva toa an’i Jesosy Kristy Tompo, izay arahintsika. Izany rehetra izany dia ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.
Ry havana malala ao amin’ny Tompo, ny Tompo Jesosy dia vonona ny hanafaka anao amin’ny fahotana, sy izay rehetra fangejan’izao tontolo izao anao. Maro ny azan’ny fahavalo mety haningotra anao dia ny fahotana sy ny rendrarendran’izao tontolo izao, ity izao tontontolo izao ity izay ahitanao fahoriana, fijaliana ara-nofo, any fa na dia ny fanahy mihitsy aza; satria izany no hita eto amin’izao fiainana izao. Hitantsika sy rentsika ireo vaovao maro samihafa manerana izao tontontolo izao, izay mampihorohoro sy mampitahotra; fa vonona Jesosy raha miverina aminy hianao, vonona Izy hanome anao dia ny fiainana ary tena fiainana fa tsy fiainana mandalo ihany fa ny fiainana mandrakizay. Ary izany no nanirahan’Andriamanitra Ray Azy mba hamonjena izao tontontolo izao, tsy ny hanamelohana azy fa ny hanafaka azy tsy ho eo ambany ziogan’i satana; araka ny Jaona 3:17 “Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao.”. Koa ankehitriny ento eo amin’i Jesosy àry ny fahotanao, ny helokao rehetra, fa vonona ny mihaino anao Izy, vonona ny hanadray anao Izy. Satria Izy no efa nilaza fa antsoy aho dia hovaliako hianao. Koa meteza ho mpiara-miasa amin’ny Tompo, meteza hamboariny ny fiainanao satria Izy no efa tonga hamonjy anao.
Jeosy Kristy no nitondra ny helokao teo ambony hazo fijaliana, niaritra fangirifiriana, niaritra ny vono sy kapoka noho ny fitiavany ahy sy hianao. Koa ankehitriny ary raha tianao atolory Azy ny enta-mavesatra ao anatinao. Meteza hianao omeo Azy ny fahotanao izay manavesatra anao rehetra amin’izao fotoana amakianao ity fampianarana ity. Meteza ho iray amin’i Kristy. Aza entina intsony ny zavatra manavesatra anao, fa esory manomboka izao, omeo an’i Jesosy Kristy Tompo; fa efa nentiny teo ambony hazofijaliana izany. Ka ho maivana ianao, ho sambatra ianao, manam-piadanana. Koa mandehana àry amin’izao herinao izao, ny fiadanan’i Jeosy Kristy Tompo anie homba anao mandrakariva; mahereza fa ny Tompo dia eo akaikinao mandritry ny androm-piainanao.
Koa apetrako aminao ny fanotiana àry, ataonao ho iza moa Jeosy Kristy Tompo.